Otu esi etinye Redis & Hazie na Fedora 35 - LinuxCapable
Otu esi etinye Redis & Hazie na Fedora 35
Wednesday, October 27, 2021 by Jọshụa James
Hazie Firewalld maka Redis
Otu esi ewepu (wepụ) Redis
Ị ga -ama otu esi etinye ma hazie Redis na Fedora 35 gị Sistemụ arụmọrụ na njedebe nke ntuziaka.
Redis na-abịa na ebe nchekwa ndabere Fedora ma na-abụkarị ntọhapụ kwụsiri ike kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ụdị dị n'azụ ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ nkesa ndị ọzọ. Fedora nwere otu ngwungwu nwụnye ndabara kacha ọhụrụ.
Iji wụnye Redis, mepee ọnụ ọnụ gị wee mebie iwu a.
Nyochaa na arụnyere Redis nke ọma site na nyochaa ụdị ya wee wuo iwu:
Site na ndabara, Redis adịghị enyere na buut ma ọ bụ rụọ ọrụ mgbe echichi gasịrị.
Iji malite ọrụ Redis:
Iji mee ka mmalite akpaaka maka ọrụ Redis na buut sistemụ:
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ime ha abụọ n'otu oge:
Ekele, ị tinyela Redis na sistemụ arụmọrụ Fedora gị wee chọpụta na ọ na-arụ ọrụ. Na-esote, ị nwere ike hazie Redis.
Site na ndabara, ọ nweghị iwu edobere maka Redis. Nke a pụtara na ị ga-achọ ịmepụta iwu ikike nke dị mkpa iji kwụsị ọgụ na Redis, enweghị nchekwa Redis ga-ebute nsogbu na egwu ahụ, yabụ ahapụla nke a ọ gwụla ma ị nwere ụzọ ọzọ iji chebe nrụnye Redis gị.
Nke mbụ, tinye mpaghara raara onwe ya nye maka amụma Redis firewalld:
Na-esote, kọwapụta adreesị IP anabatara nke enyere ikike ịnweta Redis.
Ozugbo ịmechara ịgbakwunye adreesị IP, mepee ọdụ ụgbọ mmiri Redis. Site na ndabara, nke a bụ TCP ọdụ ụgbọ mmiri 6379.
Iji wepu Redis, jiri iwu na-esonụ na njedebe gị.
Nke a ga-ewepụ Redis na sistemụ gị ozugbo.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala otu esi etinye Redis na Fedora 35 site na iji ebe nchekwa ndabere ya site na njikwa ngwugwu dnf. Ị mụtala otu esi anwale ọrụ ahụ site na ịpị ya na ịgbanwe oke ebe nchekwa yana interface netwọk iji dabara na nhazi dị iche iche.
Otu esi etinye Redis na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye & hazie Redis na openSUSE Leap 15
Categories Fedora Tags Fedora 35, Redis Mail igodo
Otu esi etinye & hazie Memcached na openSUSE Leap 15